The Lego Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း Netflix သို့လာသလား။ - Netflix ရုပ်ရှင်
The LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း Netflix သို့လာသလား။
Westwood၊ ကာလီဖိုးနီးယား - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ - ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Westwood ရှိ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Regency Village ပြဇာတ်ရုံ၌ 'Lego Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း' ပြသခြင်း၏ Warner Bros. ရုပ်ပုံများ၏ Premiere တွင်လေထု၏ယေဘုယျအမြင်။ (Sarah Morris / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Avengers တွင်သေဆုံးရန်ဇာတ်ကောင် ၅ ခု - Endgame Netflix ၏ The Dragon Prince ရာသီ2သည်ကလေးများ၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စာအိတ်ကိုတွန်းပေးသည်
LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်းသည်ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သော်လည်းကာတွန်းရုပ်ရှင်သည် Netflix သို့မကြာမီအချိန်အတွင်းရောက်ရှိတော့မည်လော။
Lego အကြောင်းကိုမရှိတစ်ခုခုရှိသေးလား အဘယ်အရာကိုကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်နက်နဲသောအရာတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Lego နှင့်အတူအမှုအရာတည်ဆောက်ခြင်းကိုချစ်ပြီးဆက်ဆက် Lego ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုချစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ The LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ရောက်ရှိလာသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ရှာချင်ဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ရှင်ထဲကတစ်ခု Netflix ကိုလာမလား။
၂၀၁၄ တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအသံများ LEGO ရုပ်ရှင်၊ Chris Pratt ၏ Emmet၊ familiar လိရှဗက်ဘဏ်များဖြစ်သော Lucy / Wlydstyle နှင့် Will Arnett တို့၏ Batman ကဲ့သို့သောအကျွမ်းတဝင်အသံများကိုကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Will Ferrell, Channing Tatum, Jonah Hill စသဖြင့်ပေးသောအခြားအကျွမ်းတဝင်အသံများနှင့်အတူ
The LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်ပြီးဆုံးသွားရာနှင့်အရာအားလုံးကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည့်အခါမှငါးနှစ်ကြာရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ သငျသညျယခုသီခငျြးဆိုပါကအရာအားလုံး Awesome ကိုငါတောင်းပန်ပြုပါ နင့်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင်ငါလည်းငါ့ခေါင်းထဲမှာစွဲနေတယ်။
ရဲ့မီးခိုးရောင်ခန္ဓာဗေဒရာသီ 14 Netflix အပေါ်ရောက်လာပေရသောအခါ
LEGO Duplo သည်အာကာသမှကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် the ည့်သည်များသည်အရာရာကိုဖျက်ဆီးနေကြသည်။ ၎င်းသည် Bricksburg မြို့သားများတစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ LEGO Duplo ကျူးကျော်သူများသည်အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးနေရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ Master Builders တည်ဆောက်နိုင်သည့်အရာထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့် Duplo ကအရာရာတိုင်းကိုမဖျက်ဆီးခင်အချိန်ကကိစ္စတစ်ခုပါ။
ဒါပဲ The LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း Netflix ကိုလာမလား။ ကံမကောင်းစွာပဲအဖြေကမကောင်းဘူး The LEGO Movie 2: ဒုတိယအပိုင်း Netflix သို့လာလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော Warner Bros. နှင့်အတူရုပ်ရှင်ပြသရန်အခွင့်အရေးသည်လက်ရှိသဘောတူညီချက်အရ HBO သို့အလိုအလျောက်သွားလိမ့်မည်။
ဒါကရုပ်ရှင်အစဉ်အဆက် Netflix သို့ရောက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင် HBO တွင်စာရင်းမသွင်းပါကရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းရှိရုပ်ရှင်ကိုကြည့်မည်ကိုသင်စဉ်းစားလိုပေမည်။ ဒါကသို့မဟုတ်ထွက်လာသည့်အခါဒီဗီဒီသို့မဟုတ် Blu-ray စဉ်းစားပါ။
နောက်တစ်ခု:ယခုအချိန်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးများရုပ်ရှင်
Colton Underwood Netflix ပြပွဲကိုဘယ်တော့လွှတ်မလဲ။
Gordon Ramsay သည် New Girl ရာသီ6တွင် Hulu ပေါ်မှဇာတ်လမ်း ၁၆ တွင် guest ည့်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
The Haunting of Bly Manor သည် Hill House ထက်ပိုကောင်းသလား။
The Simpsons: Crystal အပြာရောင်ဆံပင်ခံယူချက်မှပေါ်လွင်ချက်များ
အားလုံးအမေရိကန်ရာသီ3ယနေ့ည premieres
Cobra Kai ၏ Mary Mouser အသက်၊ Instagram၊ အမြင့်နှင့် Samantha မင်းသမီးနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရာအားလုံး
သရဖူရာသီ4အဆုံးသတ်ကရှင်းပြသည်
MAC Cosmetics မှ Selena စုဆောင်းမှုကိုရနိုင်သေးလား။
Kristen Wiig နှင့် Zach Galifianakis သရုပ်ဆောင်ထားသော Masterminds သည်ယခုအခါ Netflix တွင်ကစားနေသည်
Castle Rock recap, ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 8: Past Perfect
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀: Wentworth သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည်
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး Netflix ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင် ၁၅ ကား
ungovernable ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
Netflix အပေါ် dirilis ရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ထောင်ချိုးရာသီ5netflix အပေါ်လိမ့်မည်
Ozark ရာသီ4သည် 2021 ခုနှစ်တွင်လာမလား?
Roswell, နယူးမက္ကစီကိုရာသီ3ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ, သွန်း, အနှစ်ချုပ်, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ပိုပြီး
Vampires vs. The Bronx သည်ယနေ့ည Netflix သို့လာသည်
Netflix ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရပ်တည်မှု ၅၀ - အန်သိုနီ Jeselnik: ယခုပင်စဉ်းစားတွေးတောခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများ